FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA BASSET HOUND - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Basset Hound
Basset Hounds — Buckle amin'ny faha-3 taonany ary Bella the Basset alika kely 5 volana— 'Buckle ny lahy mahery sy hendry. Novohany irery ny varavarana mikorisa hiditra ao an-trano. Mbola zaza i Bella ilay vavy ary mbola miandry izay ho toetrany isika. '
Ny Basset Hound dia alika fohy sy somary mavesatra. Ny loha dia lehibe ary mifanaraka tsara amin'ny karandohany boribory. Ny vavam-bolo dia lalina sy mavesatra miaraka amin'ny halavany lehibe noho ny sakan'ny volony. Ny maso volontsôkôlà dia manana endrika malefaka sy mampalahelo amin'izy ireo ary milentika kely miaraka amin'ny hoka malaza. Ny molotra misy loko marevaka dia mihantona ary manidina izy ary tena tononina ny dewlap. Mihantona toy ny lasitike ny hoditra ary mianjera amin'ny volo amin'ny lohany. Ny sofina velvety dia apetraka ambany ary lava mihantona amin'ny tany. Ny nify lehibe mihaona amin'ny hety na manaikitra mihitsy. Lalina dia lalina ny tratra, mivelatra manoloana ny tongony aloha. Ny ambadiky ny alika dia feno sy boribory be. Goavana ny gadona. Azo esorina ny lalàm-panala. Ny palitao dia matevina, fohy, mafy ary mamiratra. Tsy misy lalàna mifehy ny loko, fa mazàna mainty, mainty, fotsy, mena, na fotsy misy marika chestnut na miloko fasika.
Ny Basset Hound dia mamy, malefaka, be fandavan-tena, milamina ary tsara fitondran-tena. Izy io dia mifanaraka tsara amin'ny fiainam-pianakaviana. Ny toetrany dia tokony ho sariaka foana, ary tsy ho ratsy toetra, mora tezitra na masiaka, ary ho lasa izany raha mitarika ny alika hino ny tompony fa mpitarika fonosana amin'ny olombelona. Malemy fanahy izy io fa tsy saro-kenatra be amin'ny tompony ary sariaka amin'ny ankizy. Mety ho somary mafy loha ihany io tompony malemy fanahy ary mila tompona matanjaka, matoky tena ary tsy miova izay mampiseho voajanahary fahefana amin'ny alika . Mila fantatry ny alika ny fitsipiky ny trano ary asaivo mifikitra aminy ny olombelona. Tia manao tetika ho an'ny sakafo ny Basset. Manana hiran-mozika lalina izy ireo. Sarotra ny vaky trano , saingy mahomby amin'ny fampiofanana am-paharetana sy malefaka izy ireo. Amin'ny fampiofanana sahaza azy ireo dia mankatò izy ireo, saingy rehefa mahazo fofona mahaliana izy ireo dia sarotra indraindray ny manintona ny sainy, satria tiany ny manaraka ny orony ary mety tsy maheno anao miantso azy ireo intsony. Avelao fotsiny ny Basset hitarika any amin'ny faritra azo antoka.
Haavony: Lehilahy 12 - 15 santimetatra (30 - 38 cm) Vavy 11 - 14 santimetatra (28 - 36 cm)
Milanja: Lehilahy 50 - 65 pounds (23 - 29 kg) Vehivavy 45 - 60 pounds (20 - 27 kg)
Aza atena loatra ireo alika ireo satria ny lanjan'ny lanjany dia mavesatra loatra amin'ny tongotra sy ny hazondamosina. Ny faritra misy olana dia mety ho mararin'ny paralysisa noho ny tongony fohy sy vatana lava sy lava. Toy izany izy ireo mora mitsonika , fahendrena koa ny famahanana sakafo kely roa na telo isan'andro isan'andro fa tsy sakafo lehibe iray. Raha mihinana sakafo be izy ireo dia araho maso mandritra ny ora maro na iray aza mariky ny kibo .
Ny Basset Hound dia hanao tsara ao amin'ny trano iray. Tena tsy miasa intsony izy ireo ao an-trano fa any ivelany dia hihazakazaka mandritra ny ora maro izy ireo raha omena fotoana. Hanao tsara izy ireo raha tsy misy tokontany, saingy tokony homena fotoana be mihazakazaka sy milalao hitazomana ny fahasalamana sy ny lasitra.
Mba hitazomana ny Basset Hound ho salama, dia tokony homena fanatanjahan-tena betsaka izy io, ao anatin'izany ny a dia an-tongotra lavitra isan'andro hitazomana ny alika hiorina tsara ara-tsaina, fa kosa hanakivy azy tsy hitsambikina sy hanasongadinana ny tongony aloha. Ity karazana ity dia hihazakazaka sy hilalao ora iray rehefa omena fotoana. Noho ny orony maranitra dia mirenireny mandehandeha rehefa mandray fofona. Mitandrema rehefa tsy mitarika firy fa ao amin'ny faritra azo antoka ny alika. Rehefa manangona fofona izy ireo dia mety tsy maheno anao miantso azy ireo intsony satria ny fitadiavana ilay critter any am-pita hafa no tena ifantohany.
Ankizy 8, salantsalany 8 eo ho eo no fantatra fa manana alika kely 15 na mihoatra ao anaty fako iray
Ny palitao malama sy lava volo dia mora taovolo. Afangaroy sy borosy amin'ny borosy mafy volo, ary shampoo raha tsy ilaina. Sasao ao ambanin'ny sofina isan-kerinandro ary manety tsy tapaka ny rantsan-tongotra. Ity karazana ity dia mpanafika tsy tapaka.
Ny Basset Hound dia karazany taloha izay avy amin'ny razamben'ny Bloodhound ary manana orona izay saika miavaka. Misy loharanom-baovao sasany milaza fa ny Basset Hound dia mety ho avy amin'ny alika dwarf ara-pirazanana teraka tamin'ny alika misy karazana haza fihazana. Ny anarana 'Basset Hound' dia avy amin'ny teny frantsay hoe 'bas' izay midika hoe ambany. Ny sofina lava an'ny Basset Hound dia nofaritan'i Shakespeare tamin'ny tononkalo ho 'Ears izay mamafa ny ando maraina.' Ny karazany dia natolotra tamin'ny fampisehoana alika tany Paris tamin'ny 1863, ary teo no nanomboka ny lazan'ilay alika. Niely tany Angletera ny lazany ary vetivety dia nipoitra ny fifanolanana teo amin'ireo izay maniry ny alika mba ho alika fampisehoana, mitazona azy io ho toy ny alika mpiara-miasa, ary ireo izay te hitazona azy io ho toy ny alika mihaza. Niitatra tany Amerika ny karazany, ary nanomboka nanamboatra alika ny mpiompy izay tsapan'izy ireo fa samy nihaza sy nihaza / mampiseho toetra. Ny karazany dia neken'ny American Kennel Club tamin'ny taona 1885. Afaka mihaza amin'ny fonosana roa na irery, ny alika mahay mihaza any an-davaka sy eny an-kalamanjana. Izy io dia ampiasaina hihaza amboahaolo, bitro, opossum ary pheasant. Na dia miadana aza ny reflexes an'ny alika dia manana fofona faran'izay tsara izy. Ny hoe somary miadana amin'ny tongony izy io dia midika fa mety kokoa amin'ny mpihaza an-tongotra izy io. Tsy dia mampatahotra ny lalao tsy ho tratrarina ihany koa izany. Voalaza fa i George Washington dia nanana an'i Basset Hounds izay nomen'i Lafayette azy taorian'ny Revolisiona Amerikanina.
DaisyDuke & Roscoe the Basset Hound puppy amin'ny faha-15 herinandro— 'Ny Bassetts dia mpiray tam-po ary tia trano sarotra foana. Tian'izy ireo ny mandeha an-tongotra sy tia mampiasa ny orony. Mandany ny androny mijery ny anay izy ireo osy biby . Tianay i Cesar Milan ary mijery azy foana izahay! '
DaisyDuke & Roscoe the Basset Hound puppy amin'ny 7 herinandro
Bella the Basset Hound amin'ny 2 1/2 taona— 'Bella no Basset Hound vaovao. Izaho no tompony faha-5 tao anatin'ny roa taona sy tapany. Tsy azoko ny antony, alika tsara izy. Nanararaotra niaraka taminy ihany aho, tena tsy nila alika hafa mihitsy aho. Tiako be izy. Izy dia trano voaofana . Tsy manana izy fahazaran-dratsy . Aza avela a tantaran'ny trano maro teo aloha amboary ny sainao ho anao rehefa mandray alika . Nanararaotra aho ary tiako izy. '
'Ity no Bandit. 2 taona izy ary Basset madio. Tiany ny milalao sy mivovo amin'ireo squirrels. Tiany daholo ary tena marani-tsaina izy ary apetrako eo am-baravarana ny kapako rehefa te hivoaka izy. Alika falifaly izy ary tiako izy. '
Elwood the Basset Hound amin'ny faha-5 taonany
Max the Basset Hound amin'ny faha-11 taonany
Sophiee ilay alika kely Basset Hound purebred amin'ny faha-3 volana
'Ity no fanampinay vaovao ho an'ny fianakavianay. I Daisey Mae, Basset Hound feno rà eto amintsika. Eto izy dia 8 herinandro. Tiany ny masoandro, mandeha an-tongotra lavitra ary hihinana ny sakafo tsirairay toa ny farany. :) Tena tianay izy. Manantena izahay fa hanao izany koa ianao. :) '
Droopy ny Basset Hound mainty eo amin'ny 1½ taona eo ho eo
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Basset Hound
Sary Basset Hound 1
Alika Basset Hound: Sarivongana Vintage azo angonina
alemanina mpiandry malay mix alika kely amidy
min pin shih tzu mifangaro
alika akita mainty sy fotsy